Ii-FAQs -I-Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co., Ltd.
Amaxabiso ethu axhomekeke kutshintsho kuxhomekeke kunikezo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho isitsalele ngolwazi oluthe kratya.
Ewe sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iziQinisekiso zoHlahlelo / ukuVumelana; I-inshurensi; Imvelaphi kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle apho kufuneka khona.
Iphaneli eKhokelwayo ye-Smart esebenzisana nayo, Zonke zikwiPaneli enye yeFlat eSebenzayo, Umthengisi weBhodi emhlophe osebenzisanayo, Iphaneli yokuBonisa iMfundo ePhakamileyo, Amaqela angama-75 aBonisa iPhaneli ePhathekayo, Chukumisa ukuBonisa okuPhathekayo kwePaneli,